Ndeapi maviri akajairika technical parameter eLCD anoratidza?
1. Musiyano weiyo control IC inoshandiswa mukugadzira maLCD skrini 、 Zvishandiso senge mafirita uye mafirimu ekutungamira, Inoenderana nekusiyana kwepaneru, Kune vashandisi vese, Chikamu chakasiyana che350: 1 chakwana, Zvisinei, musiyano wakadai. mundima yehunyanzvi haigone kusangana nezvinodiwa nevashandisi. C ...
Nei OLED ine hutano kupfuura LCD.
Chiedza chidiki chebhuruu, OLED kuratidza kuratidza kunonyanya kusununguka kumeso evanhu uye zvimwe zvinhu zvinoita kuti OLED ive noutano kupfuura LCD. Shamwari dzinowanzo shanyira Chiteshi B dzinowanzonzwa mutongo uyu: Barrage Eye Protection! Muchokwadi, ini ndoda kuwedzera ziso rekudzivirira Buff kwandiri, Iwe unongoda nhare mbozha kana TV ...
Iko kukonzeresa kwenoverengera coronavirus pneumonia (COVID-19, inowanzozivikanwa seya new coronary pneumonia) denda ishoma, Nissha, hombe yekubata pani yekugadzira, yakabudirira kutendeuka kubva pakurasikirwa kuita purofiti kota yekupedzisira. Uye simudza fungidziro yegore rino rezvemari reH1, Stimulate th ...
yakagadzira isingabatanidzi yakajeka yekugunzva skrini iyo inogona kuona rimwe divi rekona, Ingo kwenya chigunwe chako, Hapana chikonzero chekubata sikirini kuti ishandise. Nekupararira kwechirwere chitsva chekorona, Inotarisirwa kuiswa mune anti -spray partitions yakaiswa pamacheki ekuverenga muzvitoro ....
Yakadzika Tembiricha Poly-silicon (LTPS) pakutanga yaive kambani yehunyanzvi muNorth America muJapan kudzikisa kushandiswa kwesimba kweCherechedzo-PC kuratidza, Iyo tekinoroji yakagadzirirwa kugadzira Cherechedzo-PC iratidzike kunge yakaonda uye yakareruka, Pakati pemakore ekuma1990, hunyanzvi uhu yakatanga kupinda mudanho rekuyedza
Chiratidziro chekuratidzira chinhu chakajairika uye chakakosha muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Iyo yekuratidzira skrini inotiratidza mhando dzese dzeruzivo kuburikidza nechiratidziro, Ngatitorei ruzivo rwakawanda kubva kwazviri.Zvichienderana nezvinhu zvakasiyana uye matekinoroji, Inogona kukamurwa kuita CRT kuratidza, Plasma kuratidza.Red kuratidza ...
Mitemo yeLCD A neB yakakamurwa sei?
Zvinoenderana nehunhu hwepaneru reLCD, rinogona kuve rakakamurwa kuita mamakisi matatu: A, B uye C, Hwaro hwechikamu ichi huwandu hwemapikisheni akafa. Asi hapana mimwe yakaoma yakaoma uye inokurumidza mirau munyika, Naizvozvo, zviyero zvekutepfenyura zvenyika dzakasiyana hazvina kufanana. isu ...
Maitiro Ekuburitsa Akanakisa Magetsi Magetsi
Kutsvaga kwakanaka zvinhu zvakakosha. Chekutanga, iwe unofanirwa kuziva kuti izvo zvinhu zvinomisikidzwa mumhando mbiri huru - yekungoita uye inoshanda. Passive Zvikamu: Resistors, maCapacitors, Inductance Magetsi zvikamu zvinotsanangurwa sekushanda kana kungoita kusvika kumabasa. Muchidimbu, ...
Pamusoro peGomo Technology & SMT Midziyo
Pamusoro pegomo tekinoroji, SMT pamwe neayo inosanganisirwa pamusoro pegomo chishandiso, maSMD akakurumidza kumhanyisa gungano rePCB sezvo zvikamu zvacho zvichingo kwira pabhodhi. Tarisa mukati mechero chidimbu chemagetsi zvigadzirwa zvemazuva ano uye izere nemaminetsi emidziyo. Panzvimbo pekushandisa tsika ...
Global paneli indasitiri yekutengesa masosi echikamu chechitatu che2020
Ratidza Kugovera Chain Chain Consultants （DSCC report Chirevo chakaburitswa nguva pfupi yadarika chakati, Kutengeswa kweindasitiri yepaneru mukota yechitatu ya2020 kwasvika padanho repamusoro kubva mukota yechina ya2017, Kwe $ 30.5 bhiriyoni, Kuwedzera kwe21% kubva kukota yapfuura , Kuwedzera kwegore-pagore kwe11% ...
Fingerprint inozivikanwa tekinoroji pasi peTFT FoD skrini iri kutora chimiro
Iyo fingapurindi yekuziva yekupinda mwero pasi pechidzitiro yakawedzera, Dambudziko 30% nekukurumidza sekunge 2021 Kune ejensi fungidziro, Iyo yeminwe yekuziva tekinoroji pasi pechiratidziro yakatangwa muna 2018, Zvinotarisirwa kuti hunyanzvi uye hunyanzvi hunyanzvi huchaunzwa mu pro. ..
Gore rinotevera 86% yeLCD TV panowanikwa magetsi ichadyiwa navo!
Sangano rekutsvagisa misika Omdia rakaburitsa ruzivo rwechizvinozvino, Zvinofungidzirwa kuti LCD TV mapaneru anotumirwa achave mazana emamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri nemakumi maviri muna 2021. 6% gore-ne-gore, Asi huwandu hwekutenga hwemafekitori emhando yepamusoro eTV akakura zvakanyanya kusvika pa86%. ， Gore rinotevera, zvinogona kukonzeresa kurwira kweTV TV zviwanikwa ....